Ngokukhalipha: Ungayishayela Kanjani Imikhondo Engaphezulu Ye-B2B Nge-LinkedIn Sales Navigator | Martech Zone
Ngobuhlakani: Ungayishayela Kanjani Imikhondo Engaphezulu Ye-B2B Nge-LinkedIn Sales Navigator
NgoLwesithathu, ngoMashi 17, 2021 NgoLwesithathu, ngoMashi 17, 2021 Douglas Karr
I-LinkedIn iyinethiwekhi yokuxhumana ephezulu yabasebenzi be-B2B emhlabeni futhi, ngokusobala, isiteshi esihle kakhulu sabathengisi be-B2B ukusabalalisa nokukhuthaza okuqukethwe. I-LinkedIn manje inamalungu angaphezu kwesigidigidi sezigidigidi, anethonya elingaphezu kwezigidi ezingama-60 eziphezulu. Akungabazeki ukuthi ikhasimende lakho elilandelayo liku-LinkedIn… kumane nje kuyindaba yokuthi ubathola kanjani, uxhumane nabo, futhi unikeze imininingwane eyanele ukuthi babona inani kumkhiqizo noma kusevisi yakho.
Abamele Abathengisi abanomsebenzi ophezulu wenethiwekhi yokuxhumana nabantu bathola amathuba amaningi okuthengisa angama-45% futhi banamathuba angama-51% okuthola izilinganiso zabo zokuthengisa.
Kuyini Ukuthengisa Komphakathi?
Ngabe uqaphele ukuthi angizange ngiyiqambe le ndatshana yokuthi Ungayishayela Kanjani Imikhondo Engaphezulu nge LinkedIn? Lokho kungenxa yokuthi ukulinganiselwa kwe-LinkedIn kwenza kube nzima ukuthola ifayili le- ochwepheshe bezokuthengisa ukusebenzisa ngokugcwele ipulatifomu yokucwaninga nokuhlonza ithemba labo elilandelayo. Unqunyelwe kwimilayezo emingaki ongayithumela inyanga ngayinye, ukuthi ingaki imikhondo ongayigcina, awukwazi ukubona ukuthi ngubani obuke iphrofayili yakho, awunakho ukufinyelela kuzo zonke izinto ezitholakalayo ongazisesha, futhi awunakho ukufinyelela kumathemba angaphandle kwenethiwekhi yakho esheshayo.
Isinyathelo 1: Bhalisela i-LinkedIn Sales Navigator
I-LinkedIn yokuthengisa Navigator isiza abathengisi ukukhomba abantu abafanele kanye nezinkampani ngokufaka ithuba kumathemba afanele nabenza izinqumo. Nge-LinkedIn Sales Navigator, ochwepheshe bezentengiso bangathola imininingwane yokuthengisa ngokuthengisa okuthe xaxa, uhlale unolwazi futhi usesikhathini kuma-akhawunti akho nasemikhondweni, futhi usize ukwenza izingcingo ezibandayo zibe yingxoxo efudumele. Izici zepulatifomu zifaka:
Ukuhola Okuthuthukile Nokusesha Kwenkampani - imikhombandlela ekhonjiwe noma izinkampani ezinemikhakha eyengeziwe, kufaka phakathi ubukhulu, ukusebenza, usayizi wenkampani, i-geography, imboni, nokuningi.
Izincomo zokuhola - I-Sales Navigator izoncoma abenzi bezinqumo abafanayo enkampanini eyodwa futhi ungathola ukuhola kudeskithophu, iselula, noma nge-imeyili.
Ukuvumelanisa kwe-CRM - Sebenzisa ama-akhawunti anabantu abaningi, abagciniwe kanye nemikhombandlela kusuka kupayipi lakho kuya ku-CRM yakho ebuyekezwa nsuku zonke.
Nge-Sales Navigator ungakwazi kalula ukulandela umkhondo nobudlelwano obukhona, uhlale usesikhathini koxhumana nabo nakuma-akhawunti, futhi usebenzise ipulatifomu ukubheka kalula.
Thola Isivivinyo Samahhala se-LinkedIn Sales Navigator
Isinyathelo 2: Yakha Uhlu Lakho Lokulindelekile bese Ubhala Ikhophi Yakho Ebandayo
Kukhona igama esilisebenzisayo ku-LinkedIn lapho sixhuma nothile futhi sishaywa masinyane ngomyalezo wokuthengisa ongena ngaphakathi ... I-Pitchslapped. Anginasiqiniseko sokuthi ngubani oqhamuke naleli gama, kepha empeleni kulitshe. Kufana nokuvula umnyango wakho wangaphambili bese umthengisi ngokushesha angene emnyango bese eqala ukuzama ukukuthengisa. Ngithi "zama" ngoba ukuthengisa kwezenhlalo akuhlangene nakancane nokuphosa, kumayelana nokwakha ubuhlobo nokunikeza inani.
Ithimba laseCleverly lingongoti ekubhaleni ikhophi ebandayo ephumayo ethola izimpendulo. Beluleka ukugwema la maphutha amathathu:
Ungacaci: Gwema amagama asembonini futhi ukhulume niche ethile, ukuze ukwazi ukusebenzisa amathemba angaphakathi okusebenzisa empeleni. Ukuncipha phansi kukhulisa kakhulu amazinga okuphendula.
Sebenzisa okufushane: Noma yini engaphezu kwemisho engu-5-6 ithambekele ekushayweni ku-LinkedIn, ikakhulukazi uma ubuka kuselula. Tshela umuntu ongaba iklayenti lakho ukuthi ungakwenza kanjani impilo yabo ibe ngcono ngamagama ambalwa ngangokunokwenzeka. Imiyalezo eminingi esebenza kahle kaCleverly yimisho engu-1-3.
Nikeza ngobufakazi bezenhlaloUkuthambekela kokuqala kwethemba ukungakholelwa kuwe. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi noma yiliphi igama lilahle amaklayenti abonakalayo, usho imiphumela ethize oyitholile, noma ukhombe ezifundweni zamacala angempela.
Ngobuhlakani ubhala ukulandelana kwemilayezo okucacile, okuxoxayo, nokuqhutshwa kwenani ngethemba lakho.
Isinyathelo 3: Ungalilahli Ithemba!
Yonke imizamo yokuthengisa eqondile idinga ukuthintwa okuningi ukuze kudlulele kulokho okulindelwe. Amathemba akho amatasa, kungenzeka ukuthi awanaso isabelomali, noma kungenzeka ukuthi awacabangi nokuthola umkhiqizo noma insiza yakho. Kungakho kubalulekile ukuthi ube nohlelo lokulandelela oluhambisanayo, oluhamba kahle. Uma usuxhunywe kuwe, ithemba liba ukuxhumana kwe-1st-degree, futhi likunethiwekhi yakho ingunaphakade, ngakho-ke ubondla ngokulandelwa nokuqukethwe.
Ngobuhlakani ithumela imiyalezo yokulandelela engu-2-5 kumathemba, ukuze ikwazi ukunikeza inani elilandelanayo. Isibonelo, ukuthinta u-3 imvamisa kuyisifundo esiyisibonelo, okufakazela imiphumela yakho.
Isinyathelo 4: Kala Isizukulwane Sakho Esiholayo Ngokukhalipha
Uma lokhu kuzwakala kunzima, ungahle uthande ukuqhubeka nokusebenzisa Ngobuhlakani. I-Cleverly ineqembu layo kanye nesikhulumi lapho ixhumana khona namathemba akho egameni lakho bese icindezela ukuhola kubhokisi lokungenayo lommeleli wakho wokuthengisa lapho bengasebenzela ukuwavala khona. Lokhu kuvumela abathengisi bakho ukuthi benze lokho abakwenzayo kahle… bethengisa. Shiya ifayela le- ukuthengisa komphakathi Ngobuhlakani!
Ideshibhodi yobuhlakani ikukhombisa isifinyezo esibuyekeziwe semikhankaso yakho ye-LinkedIn, kufaka phakathi amamethrikhi afana ne-Connection Rate, Reply Rate, Ingqikithi Yenani Lezimemo Ezithunyelwe, kanye Nenani Leliphenduliwe.
Ipulatifomu yeCleverly ihlangana ne-LinkedIn ukukunikeza indlela engcono yokuphatha, yokulandela umkhondo, kanye nokuphendula kumathemba - kufaka phakathi izifanekiso zokuchofoza uthumele ukukusindisa amahora uphendula.
Ideshibhodi ngobuhlakani isebenza njenge-LinkedIn CRM eyakhelwe ngaphakathi ukugcina umkhondo wethemba lakho kumjikelezo wokuthengisa. Hlunga imiyalezo ngemikhankaso, omaki, ukuzwela kwempendulo, kusnuziwe, noma akufundiwe ukugcina ipayipi lakho lokuthengisa lihlelekile, futhi ungalokothi uphuthelwe yimpendulo
Buka imininingwane yokuxhumana yawo wonke amathuba we-LinkedIn nawo wonke umlando wakho wengxoxo we-LinkedIn kuthebhu eyodwa. Thatha amanothi kunoma yikuphi okulindelwe bese ungeza amathegi wangokwezifiso wokuhlukaniswa okulula nokuseshwa. Futhi, hlela izimpendulo zakho ukuphuma ngesikhathi nangesikhathi esizayo ukukhulisa umkhiqizo.
Hlunga ukuxhumana okusha kwe-LinkedIn ngegama, umkhankaso, amathegi, indawo, usuku, i-imeyili, nenombolo yocingo. Thumela imininingwane yokuxhumana bese ulanda uhlu lokuxhuma ngokuya ngamapharamitha akho ongawangeza ku-CRM yakho.
Yize ngobuhlakani kudala imilayezo yakho yokufinyelela ye-LinkedIn, ungenza ama-tweaks nokuthuthuka ngokuya ngempendulo yomkhankaso. Uma uthanda, ungaxhumana nathi ukuze ubuyekeze futhi uthole impendulo ngokuhlelwa kwemilayezo yakho.
Yenza imibuzo yakho iphendulwe, funda ukuthi ungazisebenzisa kanjani izici zedeshibhodi, futhi uthole imininingwane emikhankasweni esebenza kahle kakhulu ukuguqula amathemba amaningi.
I-Cleverly inesiteji esikunikeza isifinyezo esibuyekeziwe semikhankaso yakho ye-LinkedIn, kufaka phakathi amamethrikhi afana ne-Connection Rate, Rate Rate, Ingqikithi Yezimemo Ezithunyelwe, kanye Nenani Lonke Lokuphenduliwe. Njalo lapho uthola impendulo enhle ebhokisini lakho lokungenayo le-LinkedIn, uCleverly ukwazisa ngokushesha nge-imeyili.
Thola Ukubonisana Okumahhala Ngokuhlakanipha
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- I-LinkedIn yokuthengisa Navigator futhi Ngobuhlakani.
Tags: b2bukucwaningwa kwe-b2bb2b ukuthengisa komphakathingokukhaliphaukubheka okubandayothola imikhondoi-imeyiliama-imeyiliLinkedInitilogo lokuthengisa elixhumeneUkulindelaukuthengisa komphakathi
I-AddEvent: Faka kwi-Calendar Service yamawebhusayithi nama-Newsletter
I-Agorapulse: Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Elula, Elihlanganisiwe Lokuphathwa Kwemidiya Yezenhlalo